Ghostwriter injineernimada farsamada Waxaan si guul leh ugu maray barashada waraaqaha
Qorayaashayagu waxay leeyihiin khibrada lagama maarmaanka u ah injineernimada farsamada
Koorsada injineernimada farsamada waa koorso injineeriyadeed oo qadiimi ah waxaana loo arkaa inay aad u baahan tahay. Shahaadada guuleysta ee aaggan sidoo kale waxay siisaa fursado aad u fiican suuqa shaqada. Maaddaama aad tahay injineer makaanik ah, waxaad ku jirtaa baahi weyn, maxaa yeelay bulshada maanta aan la malaysan karin ma lahan injineernimada farsamada. Injineernimada makaanikada waa mid ka mid ah shaqo-bixiyeyaasha warshadaha ugu waaweyn Jarmalka waxayna bixisaa heer sare oo gelitaan iyo mushahar celcelis ah. Maaha wax aan waxba ka jirin in koorsadani ay tahay mid ka mid ah saddexda koorso ee ugu caansan Jarmalka. Kuwa jira ka sokow qaybaha firfircoonida caadiga ah suuqa shaqada wuxuu u baahan yahay tiro badan oo injineero khaas ah. Maalin kasta khabiiro cusub oo ku cusub meelaha horumarka sida digitization, tamarta dib loo cusboonaysiin karo iyo isbeddellada sida horumarka ah Sirdoonka macmalka ah loo baahan yahay. Fursadaha shaqo ee injineerada makaanikada ayaa aad u kala duwan. Qeybaha kala duwan sidoo kale midba midka kale wuu ka duwan yahay. Dhammaan wixii aad u kala duwanaan karto waa inaad ku qabataa oo aad ku bixisaa meelo kala duwan oo kala duwan inta lagu jiro waxbarashadaada. Qorayaashayadu ha ku caawiyaan taageero.Qorayaasheena ayaa ku faraxsan inay u qoraan shaqadaada qoraalladaada sayniska.
Shaqadaada waxbarasho ee sidaas ah Shaqada guriga, shahaadada Masterka, Qoraalka PhD oder Qoraal waxaad naga heli kartaa inaan kuu soo qorno. Si aad u hesho darajo wanaagsan, waa inaad caawimaad raadsataa. Sababtoo ah hawlo badan oo hordhac ah waa in la qabtaa si loo soo gudbiyo shaqo cilmiyaysan oo wanaagsan. Waa inaad si joogto ah uga shaqeysaa, adigoon hakad weyn gelin, haddii kale si dhakhso leh ayaad uga bixi doontaa mawduuca. Adeegsiga adeeggan oo kale wuxuu ku siinayaa xorriyad badan oo aad ugu diyaar garowdo imtixaannada adag. Kuweena Qorayaashu waxay leeyihiin waayo-aragnimo sannado badan ah oo ku saabsan aaggooda cilmi-baarista oo aad haysato shahaado maadadaada ah. Kama baran kartid aqoontaan dhowr toddobaad inta lagu guda jiro waxbarashadaada. Der Bachelor, Master-ka iyo Maqalka waxaa lagu dhammaystiri karaa oo keliya dadaal badan. Markaad qalin jabiso, waxaa jira ikhtiyaarro badan oo aad adigu kari kartid sayniska sayniska, tusaale ahaan inaad yeelato xirfad awooddo. Daraasad kasta way adagtahay. Laakiin gaar ahaan injineernimada farsamada, ka-tagidda iyo heerarka fashilaaddu way sarreeyaan. Ugu dambeyntii laakiin ugu yaraan, tan sidoo kale waxaa u sabab ah maadooyinka aasaasiga ah ee injineernimada sida:
Mathematikum iyo xisaabta sare,
Qalabka mashiinka ama Aragtida dhismaha,
Kuleylka iyo Dhaqdhaqaaqa dareeraha,
Engineering korontada iyo
Koorsadu waxay soo gudbineysaa aqoon takhasus leh, duruufaha iyo qaababka shaqada sayniska. Waxay awood u siineysaa takhasus gaar ah ama qoto dheer iyada oo loo marayo xulashada qaybaha aqoonta iyo maadooyinka maadooyinka Shaqada mashruuca iyo sharaxaad cilmiyeed. Aagagga takhasusku way kala duwan yihiin waxayna kuxirantahay jaamacadda ama kulleejada. Waxay u dhexeeyaan maadada caanka ah:
Tamarta dib loo cusboonaysiin karo,
habka injineernimada iyo
horumarinta wax soo saarka midig ilaa
Qaadashada aqoonta aasaasiga ah ee aagagga daraasadda la xushay waxay wax badan uga baahan tahay ardayga. Ardayga waxaa laga horjoogsadaa inuu qabto shaqo cilmiyaysan iyo dukumiintiyo cilmiyaysan. Awoodahan waa in lagu muujiyaa ugu dambayn iyadoo la dhammaystirayo qoraalka. Shuruudaha ayaa aad u sarreeya waxayna u taagan yihiin caqabad weyn ardayda badan Muddadii aad wax baraneysay, adigoo ah arday injineernimada makaanikada ah, waxaad isku aragtaa inaad wax soo saareyso Shaqada guriga, Warbixinnada ku celcelinta,Waraaqaha siminaarka oder Tixraacyo iyo sidoo kale shahaadada bachelor iyo Muxaadarooyin macallin ah juxtaposed. Waxaad kaliya bilaabeysaa inaad dhisto aqoontaada akhriska iyo xeeladaha qorista. Helitaanka xirfadahan waxay u baahan tahay hagitaan wanaagsan ama kormeer dhinac ah iyo waqti dhinaca kale ah. Arday badan ayaa ka maqan waqtiga iyo soo-jeedimaha. Tani waa sida saxda ah Adeegga qoraaga Si karti leh kuu taageer oo aan ku siino gargaarka iyo gargaarka aad u baahan tahay. Qorayaashayagu waxay qoraan shaqadaada.
Qoraal-gacmeedka guud ee injineernimada farsamada
Adeeggeennu wuxuu soo bandhigayaa qoraal-gacmeedka guud ee injineernimada. Diiradu waxay saaran tahay tayada, daryeelka iyo saxsanaanta xirfadeed. Waxaan ahmiyad weyn siineynaa wada shaqeyn aamin ah oo qasab ah iyo waliba jiheynta macaamiisha. Adigu waad na sifeynaysaa dhibaatadaada waxaanna u geynaynaa shaqo cilmiyaysan oo sax ah. Aqoonta takhasuska leh ee hadda jirta waxay ku qulquleysaa shaqadaada iyadoo la hubo dammaanad ka qaadashada xorriyadda xatooyada Kuwaaga ayaan soo saareynaa shaqada sayniska si aad ugu guuleysato waxbarashadaada.
Qoraalka ghost-ka ee qaybo kala duwan oo injineernimada farsamada ah
Kooxdayada qorayaasha waxay ku siinayaan xirfado meelo kala duwan oo injineernimada farsamada ah. Qoraaga saxda ah ayaa u heellan mowduucyadaada. Hawlahaaga waxaa xallin doona oo ka baaraandegi doona qorayaal khibrad sannado badan leh. Ka faa'iideyso aqoonta khabiirka qotoda dheer ee noocyada kala duwan ee takhasuska leh! Shaqada tacliimeed, waa inaad kireysataa hay'addeena qorista qoraaga.
Qoraal-gacmeedka loogu talagalay shaqada iyada oo lala kaashanayo shirkadaha
Marka lagu daro layliyo, qormooyin gaar ah waxay furi karaan albaabada laga soo galo shirkadda aad dooratay. Haddii aad rabto inaad dhibco kaga hesho shirkadda warbixintaada wax ku oolka ah ama qoraalkaaga, waa inaad soo gudbisaa warbixin aad u fiican. Waad ku kalsoonaan kartaa shaqada buuxda ee qorayaashayada. Qorayaasheennu waxay si taxaddar leh u baari doonaan suugaanta waxayna soo bandhigi doonaan xaaladda farshaxanka. Qoraagu wuxuu sidoo kale fulin doonaa qaab dhammaystiran, xirfadle ah oo aan cillad lahayn oo ka kooban waxyaabaha ku jira. Dabcan, waxay sidoo kale bixisaa soo koobitaan nadiif ah. Hubinta tayada ee adeegyada adiga laguu ballan qaaday waa arrin dabcan annaga noo ah. Sidoo kale waa inaad ku tiirsan tahay qoraaga ghost-ka ah ee tayada shaqadaada ee ku saabsan qoraalkaaga.
Raadi wax badan oo ku saabsan adeegyadayada iyo Fragen Nala soo xiriir bilaa waajib! Waxaan kuu damaanad qaadeynaa taageerada shakhsiyadeed ee aadka ufiican iyo xulashada qoraa sifiican ugufiican howshaada. Cilmigaaga daa Shaqada guriga qor. Qoraa-yahankeenna aqoonta leh ayaa kaa caawin doona shaqada.
Hubinta tayada ee berrinka injineernimada farsamada